कोरोना संक्रमणबाट बच्न के खाने, के नखाने ? « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 14 October, 2021 7:19 pm
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट जोगित बारम्बार हात धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दुरीका साथै तपाईंले खानपिनमा पनि असाध्यै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यो मौसममा पौष्टिक तत्व र बारम्बार पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधी क्ष्मता बलियो बन्ने गर्छ । यसले गम्भीर रोग र संक्रमणको खतरा कम हुने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्नका लागि यस्ता खानेकुराको सेवन गर्न सुझाएको छ ।
कस्तो हुनुपर्छ डाइट ?
पानीमा ध्यान दिनुहोस्
बाहिरको खाना खानबाट बच्नुहोस्
यी खानेकुराबाट टाढै बस्नुहोस्